लकडाउनका कारण गुजरातमा मात्रै ३० हजार बिवाह स्थगित – NepalayaNews.com
१४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १५:१४
अहमदावाद (भारत) । विश्वभरी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण भारतको गुजरात राज्यमा मात्रै कम्तीमा तीस हजार बिवाह स्थगित गरिएका छन् ।
कोरोनाको संक्रमण फैलिन लागेपछि सरकारले देशव्यापी लकडाउन घोषणा गरेकाले उनीहरुको बिवाह स्थगित भएको हो ।
पछिल्लो दुई महीनामा मात्रै यती धेरै बैवाहिक कार्यक्रम स्थगित भएको बैवाहिक कारोबार गराउने संस्थाहरुले जानकारी दिएका छन् । ‘गुजरात प्रदेशभरीमा मात्रै पछिल्लो दुई महीनामा मात्रै कम्तीमा तीस हजार बिवाह स्थगित भएका छन्,’ होटल तथा रेस्टुरेन्ट एसोसिएशन गुजरातका प्रवक्ताले भने ।
सरकारले ५० जना मात्रै मानिस सहभागी गराएमा र आधारभूत स्वास्थ्य सतर्कताहरु अपनाएमा मात्रै बैवाहिक कार्यक्रम गर्न दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले यही १८ मे देखि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाएको भएपनि बैवाहिक कार्यक्रमका लागि भने गाह्रो नै रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
‘मानिसहरुले अहिले धमाधम बैबाहिक कार्यक्रम स्थगित गर्दै अर्को लगनको समयको प्रतिक्षा गरेका छन्, अव डिसेम्बर र जनवरीमा मात्रै बिवाह हुनसक्ने देखिएको छ,’ एक व्यवसायीले भने । सरकारले लागू गरेको मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै बिवाह गर्न निकै कम जोडीले मात्रै गरेका छन् । अति बाध्यात्मक अवस्थामा रहेका बाहेक अधिकांशले प्रतिक्षा नै गरेको पाइएको छ ।
आफ्नो विवाहको फोटो र भिडियोमा मुखमा मास्क लगाएको, हातमा पञ्जा लगाएको र आफन्तहरुको न्यून सहभागीता भएको कसले चाहन्छ र ? त्यसैले अत्यावश्यक बाध्यता परेका बाहेक अन्यले प्रतिक्षा गरेको हुनसक्ने बैवाहिक कार्यक्रम गराउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । रासस/पिटिआई
चीनको आक्रामकता बढ्दै जाँदा अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिप्रति समर्थन बढ्दै १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १५:१४
टिकटक माथिको प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १५:१४
अर्बौका मालिक ट्रम्पमाथि कर छलेको आरोप, एक दशकसम्म तिरेनन् आयकर ! १४ जेष्ठ २०७७, बुधबार १५:१४